Home Wararka DF oo shaacisay magacyada 5 Somali ah oo Qabow ugu dhintay Xuduudka...
DF oo shaacisay magacyada 5 Somali ah oo Qabow ugu dhintay Xuduudka Turkiga iyo Greece
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay magacyada Soomaali ka mid ahaa tahriibayaasha meydkooda laga helay xuduudka dalalka Giriiga iyo Turkiga ee Qabowga u dhintay.
Dadkaasi waxaa ku jiray shan qof oo Soomaali ah. “Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si weyn uga xumaatay dhacdadii naxdinta lahayd ee soo gaartay shaqsiyaadkii aan u baroordiiqnay todobaadkan. Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay qoysaska iyo eheladii ay ka baxeen dhibanayaasha soo socda”:
1- Cabdi Mahdi Cali
2- Yaxye Jamaal Muumin
3- Abuubakar Axmed Ibraahim
4- Naasir Sulemaan Xasan
5- Najax Cabdi Axmed
Wasaaradda Arrimaha dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u soo jeedisay dalalka ay khuseyso iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR inay si degdeg ah u daba galaan oo ay baaritaan ku sameeyaan xaaladdaha ku xeeran dhimashada muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waxay si kulul u cambaareysay xadgudubyada ka dhanka ah Xuquuqda Aadanaha, karaamada Aadanaha iyo Badbaadada nolosha bini’aadamka iyadoo la raacayo Axdiga 1951 ee laxiriira Xaalada Qaxootiga iyo Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka.
Previous articleWeerar culus oo lagu qadaay garoon ku yaalla Sacuudiga
Next articleTurkish ship docked near Al-Shabaab stronghold under UN investigations
Ururka Al Shabaab oo meel fagaare ah ku toogtay dad shacab...
Trump oo sheegay in qareenkiisa laga helay cudurka Covid-19.